आमाले माया नगरे पछि ५ घ`ण्टा स`म्म लगा`तार रोयो यो हा`त्तीको ब`च्चा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/आमाले माया नगरे पछि ५ घ`ण्टा स`म्म लगा`तार रोयो यो हा`त्तीको ब`च्चा !!
आमाले माया नगरे पछि ५ घ`ण्टा स`म्म लगा`तार रोयो यो हा`त्तीको ब`च्चा !!
काठमाडौ -आफ्नो ब`च्चाको कुन आमा`लाई माया लाग्दैन होला र आमा बिनाको बच्चा सायद सो`च्न पनि सकिदैन । आमा नै संसा`र हो आमा ममताकी खानि हुन। त्यस्तै एक हात्तीले बच्चा जन्मायो तर उसले आफ्नो बच्चा लाई माया गर्ने त के हेर्ने पनि चाहेन उक्त आमा हा`त्तीले आफुले जन्म दिएको बच्चा`लाई धकेलेर खसा`लिदियो ।
त्यस पछि यो बच्चा ल`गातार रुन थाल्यो धकेलेर तर पुर्याए`पछि ्गहिरो चो`ट लाग्यो गहिरो चोट लागेको त्यो बच्चा`लाई डाक्टरहरुले उपचार गरे २ घण्टा पछि आमाको नजिक पठाइदिए । तर उसले सुडले बच्चा`लाई फेरी हा`न्यो र लखे`ट्यो आमाले लखे`टेपछि हात्ती ब`च्चाको आँखामा ल गालार आसुको बर्षा हुन थाल्यो र ५ घण्टा सम्म रोइर`ह्यो ।
लकडाउन`सँगै राष्ट्रिय निकु`ञ्जमा मानिसको चह`लपहल घटेको छ । यति नै बेला दक्षिण अफ्रिकामा सिं`हको बथान सडकमा निस्किएको छ ।‘
सामान्य दिनमा यो क्षेत्रमा पर्यटकको भीड हुन्थ्यों, तर २५ मार्च`यता देशभर भइरहे`को लकडा`उनका कार`ण क्रुग`र बन्द गरिएको छ । ‘दिउँसै सड`कमा पल्टनु अस्वभाविक छ किनकी सामान्य परिस्थि`तीमा यहाँ भीड जम्मा हुन्छ र उनीहरु घाँ`समै गएर बस्छन्,’ पार्कका प्रवक्ता इसाय`क फा`ल्लाले सी`ए`नएन`सँग भने ।